Afar tababare Oo U Sharaxan Shaqada Tababaranimo Ee Barcelona | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Afar tababare Oo U Sharaxan Shaqada Tababaranimo Ee Barcelona
Kooxda Barcelona ayaa maraysa wakhti adag kadib ka hadhistii champions League ee ay kaga hadhay soo laabashadii taariikhiga ahayd ee Semi-finalka ay samaysay Liverpool ka hor inta ayna Valencia u waayin finalka Copa Del Rey-ga.
Kadib markii ay Barcelona ku fashilantay in ay ku guulaysato labadaas koob, Mustaqbalka Ernesto Valverde ee kooxda ayaa shaki weyn galay khatarna ku jiro ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub inkasta oo uu dhawaan heshiis cusub saxiixay.
Wargayska Sport ayaa Kashifay 4 tababare oo u sharaxan shaqada tababaranimo ee Barcelona hadii ay Barcelona go,aansato in ay shaqada ka caydhiso Valverde ka bilowga xilli ciyaareedka dambe.
Tababaraha Ugu horeeya ayaa ah tababaraha Kooxda Ajax ee Erik Ten Hagg kaas oo kooxda Ajax ku hogaamiyay xilli ciyaareed cajiib ah 2 koobna ku hogaamiyay kooxda iyo waliba Semi-finalka Champions League.
Tababaraha 2-aad ee u sharaxan in uu Valverde ka badalo shaqada Barcelona ayaa ah tababaraha xulka qaranka Holland ee Ronald Koeman kaas oo laftiisu si cajiib ah u dhisay xulka qaranka Holland.
Tababaraha 3-aad ayaa ah tababaraha reer Spain ee haatan hogaamiya xulka qaranka Belguim ee Roberto Martinez kaas oo xulka Belguim geeyay kaalinta 3-aad ee koobkii adduunka Russia 2018.
Tababaraha ugu dambeeya ee lala xiriirinayo ayaa ah tababarihii hore ee kooxda PSG ee Laurent Blanc kaas oo ah tababare khabiir ah oo ku soo guulaystay champions League waana tababare ciyaara kubad xiiso leh.